Black chokeberry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Black chokeberry
Ahoana ny fomba hanomanana ririnina (aronium) mainty ho an'ny ririnina
Chokeberry (antsoina ihany koa hoe "chokeberry") dia zavamaniry misy voankazo tsara tarehy sy mamy, izay manintona tsiro mahafinaritra, malefaka ary mamy. Ny voankazo dia manankarena vitaminina C, P, E, PP ary vitaminina vitaminina. Ankoatra izany, ny caronine sy ny singa maromaro dia ampahany amin'ny voankazo, ny boribory, ny fary, ny varahina, ny manganese ary ny molybdena.
Recipe ho an'ny divay mainty hoditra mainty
Ny divay homemade avy amin'ny chokeberry dia tsy vitan'ny fanandramana mahafinaritra, fa ny fanasitranana koa, indrindra raha tsy manomana vodka ny zava-pisotro. Ny votoatin'ny fanolokolo divay mainty dia mora tsotra, na dia voaomana ao anatin'ny roa volana aza. Na izany aza, ity dingana ity dia tsy mendrika ny ezaka, fa ho eo an-tsoroka na dia ho an'ny mpangataka, satria tsy mitaky fitaovana manokana sy fahaiza-manao manokana.
Ahoana ny famokarana soritraretina mainty hoditra: fisehoana mahandro sakafo
Ny maintin'ny kitay mainty dia alika malaza izay afaka manomana mora foana ao an-trano. Ny voankazo Rowan dia manana tombony lehibe amin'ny fampisehoana ny fisotroana mandritra ny fanomanana, ary azo ampiasaina amin'ny doka kely toy ny fanafody izany. Ny endriky ny fifantenana ireo voankazo Black chokeberry, izay mbola hita eo ambanin'ny anarana chokeberry Aronia - ireo dia berries manana fofona mampitolagaga sy firaisana tsy manam-paharoa amin'ny vitamina sy mineraly.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Black chokeberry